Ajandaa Dhokataa Siyaasa Xoophiyaa fi Haala Qabatamaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo Mudachaa Jiru. – Oromedia
Home » Xiinxala » Ajandaa Dhokataa Siyaasa Xoophiyaa fi Haala Qabatamaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo Mudachaa Jiru.
Galata Qabsoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo haa ta’u malee yeroo ammaa kana humnoonni Oromoof qabsaa’an sadii fi isaa ol ta’aa jiru. Akka Jaarmiyaatti ABO fi KFO tu QBOf aarsaa kaffalaa ture; har’as kaffalaa jira. Erga waggaa lamaa as immoo OPDOn #TeamLammss toora Qabsoo Bilisummaa Oromootti waan dabalame fakkaata. Waa’ee haalaa fi egeree QBO dubbachuun dura duubee walaansoowwan siyaasa Xoophiyaa keessa jiranii fi turan kaasuun barbaachisaadha.
Akkuma beekamu siyaasni Xoophiyaa baroota dheeraadhaaf olaantummaa ilaalcha habashootaatiin durfamaa har’a gahe. Gama tokkoon Qabsoo bilisummaa fi mirga diimokiraasii hadhawaa sabaa fi sablammootni biyyattii walitti fufiinsaan taasisaa jiraniin yeroo ammaa jijjiiramni abdachiisaan biyyattii keessatti dhufuu danda’eera. Gama biraan ammo, tarkaanfileen siyaasaa gama mootummaatiin fudhatamaa jiran muddama siyaasaa mootummaa mudate irraa of boqochiisuuf dursa kennuu irratti qofa kan xiyyeeffate waan fakkaatuuf jijjiirama ta’aa jiruu fi daran ta’uuf shakkii uumeera.
Akkuman duratti kaasuuf yaale biyyattii keessatti ilaalchotni siyaasaa bu’uraa wal morkan lamatu jiru. Ilaalchota kana da’eeffachuudhaan humnootiin ijaaramanii mooraa gara garaa tolfachuun tokko isa kan biraa dhabamsiisuuf walirratti hojjetaa turan, har’as itti jiru. Haala dimokiraasii fakkaateen qaama hundumaa bakka tokkotti haammachuuf mootummaan adeemsisaa jira. Haa ta’u malee kana duubatti garuu sochiin jaarmiyaaleen siyaasaa gartuu garboomfattootaa fi gartuu cunqurfamtoota biyyattii gidduutti taasifamaa jiru daran yaaddessaa dha. Wanti qabatamaatti mul’atu mooraan lachuu diinummaa gidduu isaanii jiru furatanii egeree biyyattii karaa dimokiraatawaa ta’een murteessuu qabu. Faallaa kanaa garuu, kuukkii garaatti baatanii wal dhabamsiisuudhaaf humna jajjabeeffachaa jiraachuun isaanii ammas biyya kana gaaga’ama biraaf qopheessaa jira.
Humnootiin mooraa garboomfataa keessatti argaman hundi garaagarummaa siyaasaa qaban moggaatti gatanii olaantummaa isaanii haphachaa dhufe deebisanii tikfachuuf yeroo isaan halkaniif guyyaa hojjetan argina. Jarri kun humnaa fi meeshaa waraanaa qaban walitti qindeeffatanii akkuma kaleessaa sabaa fi sablammoota cunqurfamoo biyyattii irratti deebisanii gad of dhaabuuf tattaafataa jiru. Kanaan wal qabatee tooftaa dulloomaa duraan itti gargaaramanii Jaarmiyaalee bilisummaa fi mirga diimokiraasiitiif qabsaawan cabsaa turan har’as haaromsanii itti fufaniiru. Tooftaan kunis mooraa qabsaa’ota mirga dimokiraasii fi bilisummaa sabaa qoqqooduun laamshessanii dorgommicha akka salphaatti injifachuuf yaaluudha.
Gama mooraa qabsaa’ota mirga dimokiraasii fi bilisummaa sabootaatiin wanta lamatu calaqqisa. Inni tokko gamtaa jaarmiyaalee yeroo ta’u inni kan biraan immoo qoqqoodama keessoo isaaniiti. As keessatti wanti hubatamuu qabu waan qoqqoodama keessoo Jaarmiyaalee kanaatiif sababa ta’uu dha. Sababni inni duraa jaarmiyaaleen maqaa sabaatiin socho’an kanneen gariin isaanii harka keessa naqannaa garboomfattootaatiin kan socho’an akkasumas akeekaa fi galii ifaa fi bilisa ta’e warra hin qabneedha. Kaleessas taanaan mooraa qabsaawota haqaa fi bilisummaa kan dadhabsiisaa ture adeemsuma kana.
Gama gamtaa Jaarmiyaalee kanaatiin wanti mul’achaa jiru inni kan biraan sochii humna qaban jajjabeeffachuuti. Isaanis haala kaleessa isaan mudate sana irraa muuxannoo fudhachuun dorgommichaaf waan of qopheessaa jiran fakkaatu. Kan nama dhibu garuu gareen kun fedhii araaraa guddaa qabaatanis gaaffiin qabsoon isaanii mootummaadhaan fudhatama dhabee hanga yoonaatti turuun sochii mootummaan taasisu hiika dhabeessa gochuu bira darbee gareen lameen gidduutti garaagarummaa duraan jiru babal’isuutti ce’eera.
Walumaagalatti haalli amma jiru kun abdachiisaa fakkaatus gaaffii bu’uraa qabsaawotaa furuu caalaa mooraa garboomfattootaatiif abdii ta’aa jira. Egereen biyyattiis hookkara siyaasaa qabattee boqonnaa jeequmsaa kan biraatti akka hin ceene akka nama dhuunfaatti sodaan qaba. Wanta kana hambisuuf hooggansi mootummaa amma jiru gaaffii haqaa fi bilisummaa garee qabsaa’otaa kanaaf #XIYYEEFFANNOO kennuun dirqama ta’a. Akka ‘First Things First’ jedhamu sana qaamaa fi wantoota dursa kennuun maluuf dursa akkasumas xiyyeeffannoo kennuun waan hundumaaf furmaata ta’a.
Akka duubeetti hanga kana yoon dubbadhe, yeroo itti aanummoo Haala Qabatamaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo Mudachaa jiru qabadheen dhiyaadha!
Waaqatu Walabummaa, Birmadummaa, Mirga Jiraachuu, Dubbachuu Nuuf Kenne! Eenyus Nurraa Mulquu hin danda’u!
Previous: Wal’aansa Mataa
Next: ኦነግና የኢትዮዽያ መንግስት ተስማሙ።